Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo ku geeryooday geeriyooday Nairobi | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo ku geeryooday geeriyooday Nairobi
Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo ku geeryooday geeriyooday Nairobi
Waxaa xalay Isbitaal ku yaalla Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ku geeriyooday Madaxweynihii hore ee dowlad Goboleedka Puntland Maxamed Cabdi Xaashi.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Marxuum Maxamed Cabdi uu maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay Magaalada Nairobi, iyadoo xalay uu u geeriyooday xanuunkii haayay, sida ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka tacsiyeeyey geerida Alle ha u naxariistee Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo ku geeriyooday Magaaladda Nairobi.
Alle ha u naxariistee Madaxweynihii hore Puntland Marxuum Xaashi ayaa wuxuu ka mid ahaa Aasaasayaashii kasoo shaqeeyay dhismaha Maamulka Puntland, sidoo kale waxaa uu soo noqday Madaxweyne Ku-xigeenkii ugu horeeyay ee Puntland.
“Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu uga tacsiyaynayaa geerida marxuumka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan Puntland, eheladii, asxaabtii, qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay, waxaana uu Alle uga baryayaa marxuumka inuu dembigiisa dhaafo, su’aasha qabriga u sakhiro, kuna abaalmariyo Jannatul Fardawsa” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Madaxtooyadda Puntland.
Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland oo ku geeryooday geeriyooday Nairobi was last modified: July 12th, 2020 by Admin
Sarkaal Al-shabaab u qaabilsanaa canshuuraha iyo askaraynta oo la dilay
. AKHRISO;-Wasiirka Gaashaandhigga oo $51,000 ku wareejiyay Guddiga Abaaraha
Dhageyso:-Ganacsatada Baydhabo oo ka hadashay dib u dhaca doorashada Koonfur Galbeed iyo ciidamada Dowladda ay keentay Baydhabo.
Dowladda Somalia iyo Qaramada Midoobay oo Baaq soo saaray
Guddiga Doorashada Guddoonka Baarlamaanka 2aad ee Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay
Dhageyso maareeyaha Garoonka diyaaŕadaha Shaati Gaduud baydhabo oo ka warbixiyey diyaarad cilad ku timid iyo in si kumeel gaar loo hakiyey duulimaadyada rayidka